Trump oo ballan qaaday inuu xoojinayo awoodda militariga Maraykanka - BBC News Somali
Musharraxa xisbiga Jamhuuriga ee doorashada madaxtinimada Maraykanka, Donald Trump, ayaa Philadelphia ka sheegay in haddii uu ku guulaysto doorashada uu ballaarin doono dhammaan waaxyaha ciidamada milateriga Mareykanka.
Mr Trump ayaa siyaasaddiisa ku tilmaamay wax uu ugu yeeray inay tahay "nabad awood ku timid" isagoo tilmaamay in Maraykanku uu door muhiim ah ka ciyaari karo horumarinta ammaanka isagoo xoojiya milaterigiisa.
Sidoo kale Trump waxa uu doonayaa in dhammaan xulafada Maraykanka ee NATO inay ka soo baxaan waajibaadkooda oo ay boqolkiiba 2 dakhligooda ku kharash gareeyaan difaaca.
Hase yeeshee haweenayda u sharaxan Xisbiga Dimuqraadiga, Hillary Clinton, ayaa su'aal galisay kartida uu ninkan ay tartamayaan ku noqon karo taliyaha guud ee ciidamada Maraykanka, waxaana ay sheegtay in codbixyayaasha Mareykanka ay u arkaan inuu khatar ku yahay dalka.
Mrs Clinton waxa ay qiratay in emailadeedii la jabsaday ay Maraykanka ka noqotay hadal haynta siyaadadeed, hase yeeshee waxa ay sheegtay in aanay jirinba qaab ay ku caddeyso in ay dhibbane u noqotay dambi internetka ah.